तिथि मेरो पत्रु लागि लेख्नुहोस्
ठूलो हाम्रो टोलीमा सामेल योगदानकर्ताओं.
हामी सधैं लेखकहरूले ठूलो लेख स्वीकार गर्दै, ब्लगर्स र स्वतंत्र लेखकहरूले. हामी देख रहे को एक विचार को लागि, साइट मा लेख केही माध्यम पढ्न कृपया. यो पनि तपाईं हाम्रो टोन को एक विचार र हाम्रो दर्शकहरु लागि राम्रो काम गरेको छ भनेर लेख को प्रकार दिनेछु.
केही सामान्य जानकारी:
लेख प्रकाशन मा हाम्रो निर्णय व्यक्तिगत प्रत्येक लेख को योग्यता र उपयुक्तता मा आधारित छ.
हामी आफ्नो पहिलो लेख प्रकाशित गर्न सहमत भने, भुक्तानी प्रत्येक लेखमा हाम्रो वर्तमान दर मा बनेको छ पहिले त सम्झौता पत्र हस्ताक्षर हुनेछ. यो पछि प्रस्तुतिहरु प्रकाशित हुनेछ भन्ने एक सम्झौता हुनेछैन. प्रकाशन को लागि सबै पछि प्रस्तुतिहरु व्यक्तिगत प्रत्येक लेख को योग्यता र उपयुक्तता आधारित हुनेछ.
हाम्रो लक्षित दर्शकहरु हामीलाई छन् 18 एकल वयस्क.
सानातिना अपवाद संग, लेख बीच हुनुपर्छ 600-1000 शब्दहरू.
राम्रो काम गरेको छ भनेर सामग्री शीर्षक बलियो विशेषण हो, संख्या (जस्तै सूची) र प्रश्नहरू.
सबै लेख प्रस्तुतिहरु मूल हुन र अघि प्रकाशित कहिल्यै पर्छ.
लेखक भूत लेखकहरूले हुन फैसला वा आफ्नो प्रोफाइल साइट मा प्रकाशित हुन सक्छ.
छलफलको लागि एउटा लेख पेश गर्न, लेख इमेल कृपया:
datemypet.com AT अधीनमा
नोट: एजेन्सी वा व्यापारिक कारोबार देखि निवेदन एक गैर भुक्तानी आधारमा छलफल गरिनेछ
तपाईंको पहिलो तिथि आनन्द उठाउन कसरी